हामी सबै अनौंठो | Martech Zone
सोमबार, सेप्टेम्बर 26, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जति सक्दो मैले देखें कि त्यहाँ केवल सीमित प्रतिलिपिहरू थिए हामी सबै अनौंठो छौं बिक्रीको लागि बाहिर, मलाई थाहा थियो कि मैले एउटा प्रतिलिपिको अर्डर गर्नुपर्‍यो। यो सेठ गोडिनको सबैभन्दा नयाँ पुस्तक हो र यो एक सानो सानो घोषणापत्र हो।
भित्रि बाहुलाबाट: गोडिनको तर्क यो छ कि जनतालाई बढी रद्दी बेच्न सहयोग पुर्‍याउन मात्र हामी सबैलाई विश्वव्यापी सामान्यतर्फ धकेल्ने छनौट असक्षम र गलत हो। हाम्रो समयको अवसर अनौंठोलाई समर्थन गर्ने, अनौंठोलाई बेच्न र, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, अनौंठो हुनु हो।
सामग्रीको साथ यो चित्र हो जुन सेठ गोडिनले वर्णन गरेको वर्णन गर्दछ। भूमण्डलीकरण, सस्तो वितरण, र बढेको संचारले हामी सबैलाई हामी जत्तिकै अनौंठो हुन सक्षम बनाएको छ वास्तवमा छन् हामी सामान्य हुनुपर्दैन - हामी रुचि, रुचि र स्वादको साथ मान्छेहरू पाउँदछौं जुन विश्वका सबै कुनामाबाट आउँछ।
जस्तो कि यो आधुनिक मार्केटिंगमा लागू हुन्छ, पुस्तकको सन्देश मेरो विचारमा आलोचनात्मक छ। त्यहाँ धेरै धेरै सामाजिक मिडिया को उपयोग गरीरहेको छ केवल अर्को च्यानल। यो कथन हो कि मँ सबै समय सुन्छु र यो एकदम गलत छ। यो मात्र हो केवल अर्को च्यानल जब तपाईं यसलाई मार्फत एक तरिकामा बेच्ने प्रयासमा तपाईंको समय बर्बाद गर्न चाहानुहुन्छ। लक्ष्यीकरण बाहिर सामाजिक मिडिया संग आदर्श युक्ति छैन।
कम्पनीहरूसँग स्रोतहरू र अवसर प्रदान गर्ने अवसर छ अजीब जम्मा गर्ने, साझेदारी गर्ने र कुराकानी गर्ने ठाउँको साथ। चार-ब्रेलको सामाजिक समुदाय ग्रिल बेच्न को लागी हैन, यो ग्रिलको जुनसुकै धार्मिक छ को लागी एक धार्मिक मानिसहरुलाई एक साथ ल्याउने बारे हो। एक पटक त्यो समुदाय फस्टाउँछ, तिनीहरू ब्रान्डको कदर गर्दछन् जसले उनीहरूलाई अवसर दिए र अन्तमा, बिक्री पछ्याउने छ।
तपाईको कम्पनीले अनौंठो लाग्नको लागि विकास गर्ने ठाउँ उत्पादन वा सेवामा सान्दर्भिक हुनुपर्दैन। अन्य कम्पनीहरूले एउटा समुदाय, परोपकारी संस्था, घटना वा अन्य कुनै साधारण उद्देश्यको वरिपरि सामाजिक जमघट बढावा गर्ने शानदार काम गर्छन्।
हाम्रो एजेन्सी यो ब्लग, हाम्रो भिडियो श्रृंखला, हाम्रो रेडियो कार्यक्रम, र लक्षित क्षेत्रीय र राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्दै छ भने भारी हामी जस्तो अनौंठो मान्छेहरू कि मार्केटिंग को लागी टेक्नोलोजी लाईभ गर्न मन पर्छ हामी अनौंठो छौं ... हामी बरु कोड, एपीआई, बीटा अनुप्रयोगहरू, विश्लेषण र अन्य मार्केटिंग शीर्षकहरूको भन्दा स्वचालन। हामी फेसबुक, Google+ वा ट्विटर समाचारको बारेमा धेरै कुरा गर्दैनौं ... ती शीर्षकहरू हुन् सामान्य र तपाईं ट्राफिकको लागि लडिरहेको दुई सय ब्लगहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ!
हामी अनौंठो रहनेछौं।
कस्तो राम्रो किताब। मलाई किताब मन पर्छ कि हामी के गरिरहेछौं भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ र यसमा कडा परिश्रम गर्न हामीलाई धक्का दिन्छ। सेठले भने जस्तै, लक्ष्य भनेको पत्ता लगाउनु र संगठित गर्नु र परिवारको एउटा टोलीको नेतृत्व गर्नु, तिनीहरूको विचित्रतालाई अँगाल्ने, यो लडाई नभई। म आशा गर्छु कि हामीले त्यो गरिरह्यौं!
यो कुराकानीलाई बढावा दिन, कृपया हाम्रो मिटअप पृष्ठमा शामिल हुनुहोस् र हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस् (माथिको)। तपाईलाई इन्डियानापोलिसबाट हुन आवश्यक पर्दैन जबकि क्षेत्रीय घटनाहरू सबै त्यहाँ पोष्ट गरिएको छ। हामी चाँडै केहि वेबिनारहरू र भर्चुअल घटनाहरू सुरू गर्न जाँदैछौं - सायद पहिलो, यस रूपमा डोमिनो परियोजना अनुरोध, साझा र यस पुस्तक छलफल गर्न को लागी हो!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 26::2011० अपराह्न
मलाई धेरै कुरा लाग्दछन् डान केनेडीले आफ्नो भर्खरको भिडियोहरूमा भनेको कुराको रूपमा। म विश्वस्त छु कि यदि अधिक व्यवसाय / व्यवसाय मालिकहरू सबै जस्तो हुन को लागी प्रयास गर्न रोक्छन् र केवल आफ्नो विशिष्ट गुणहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र उनीहरूको अनौंठो कथा र परिप्रेक्ष्य साझा गर्दछ, तब उनीहरूले आफ्नो वास्तविक ब्रान्ड स्वचालित र जैविक रूपमा देखा पर्नेछन्। यो पुस्तक र डान यो पुष्टि भएको देखिन्छ। मलाई सेठको पुस्तकको प्रतिलिपि लिनु पर्छ!
स्कट, म जाँदा बाहिर जाँदैछु दान क्यानेडी! म शीर्षकमा गहिराइ डाटा र कुराकानीमा केहि थप हेर्न चाहन्छु।